MOVANSY RAVALOMANANA : NANDROTSAKA NY ANTONTAN-TARATASY HO KANDIDA DEPIOTE – MyDago.com aime Madagascar
MOVANSY RAVALOMANANA : NANDROTSAKA NY ANTONTAN-TARATASY HO KANDIDA DEPIOTE
Nandrotsaka kandida hifaninana amin’ny fifidianana depiote hotanterahana amin’ny 20 Desambra 2013 izao ny movansy Ravalomanana. Nifarana androany mantsy ny fe-potoana fanaterana ny antontan-taratasy filatsahankofidiana depiote manerana ny Nosy. Ireo disitrika 119 dia nandrotsahan’ny movansy Ravalomanana kandida avokoa. Ho an’Antananarivo sy ny manodidina dia fantatra fa ny Me Hanitra Razafimanantsoa ny kandida depiote eny amin’ny boriborintany I, izy no mitarika ny lisitra eny. Ho an’ny borinborintany II dia Andriamatoa Stanislas no mitarika ny lisitra. Ny boriborintany II dia Andriamatoa Mamy Rajhoson mitarika ny lisitra., ny boriborintany IV dia Andriamatoa Felix mitarika ny lisitra., ny boriborintany V dia Andriamatoa Guy Rivo Andrianarisoa mitarika ny lisitra., ny boriborintany VI dia Ramatoa Horace Rasoanoromalala mitarika ny lisitra., ny eny amin’ny disitrikan’Atsimondrano dia Ramatoa Voahangy mitarika ny lisitra. Nambaran’ny Me Hanitra Razafimanantsoa nandritra ny fanaterany ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana teny amin’ny Ovec boriborintany I ny tolakandro teo fa ny antony nilatsahany dia tohiny ny zavatra nitranga tamin’ny 2009. Ny lafiny iray ihany koa hoy izy dia nisy ny fianarana teny ambony latabatra'(teoria),. Fantatra tsara hoy izy ny traikefa nahateo amin’ny Cst, ny asan’ny pralemantera tamin’ity tetezamita ity dia nanosika hilatsaka satria tsy azo viraviraina toy izany ny parlemantera. Mila mpisolovava ny vahoaka , izay no tadiaviny noho izanydia tsaratsara kokoa ny mirotsaka, noho ny mamporisika. Ny asan’ny depiote hoy izy dia manao fampanantenana poak’aty daholo izay milaza fa hanamboatra trano, tsena kanefa tsy izay no asan’ny depiote. Tena misolo ny vavan’ny vahoaka ianao hoy izy kanefa ao anatin’izay dia misy asa be. Io lalàna io dia tsy ataotao foana. Ny movansy Ravalomanana dia efa nieritreritra fa rehefa hanao fifidianana dia mandray anjara amin’ny rehetra. Rehefa nisy ny fandraisana anjara amin’ny fanohanana ny Dr Robison dia rariny sy hitsiny loatra raha manamafy ny parlemantera ny movansy Ravalomanana ary ireo fifidianana manaraka eo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 septembre 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “MOVANSY RAVALOMANANA : NANDROTSAKA NY ANTONTAN-TARATASY HO KANDIDA DEPIOTE”
Fa inona ity ? Maty aho Razaka, tena maty aho r’Ingadriana ! Nahoana no dia nomen’olona ity izy ? Tsssssssssssss !!!!!!!!!!!!
24 septembre 2013 à 3 h 30 min
Izany hoe tsy azo hampiasaina intsony izany ny teny hoe FIHEREHANA na hoe koa ANKOLAFY fa lasy hoe « movansy » izao.. mety fanakianana madinika izany, saingy mampiseho tsara hoe hatraiza ny fanjanahan’ny frantsay antsika. Teny hananantsika izao ary roa be izao fa tsy hoe tsy misy akory nefa dia aleo ilay teny frantsay ho hampiasaina. Gaga @ ireo mpitarika ny nkolafy Ravalomanana aho, aiza ilay maha malagasy raha ny tenintsika no tsy hampiasana. Toe ilay manonona « R @ twny frantsay no betsaka, dia ilay manao…..
Fanakianana madinika iy hoy aho, fa ny erikerika no maha-tondra-drano.
Ny faniriana izao dia handresy i JLR ary ny solombavambahoaka dia hoa lasan’ny ANKOLAFY Ravalomanana. Ary tena hanao ny politika-dravalo izay lany eo fa tsy hitanty ra-kena.
Fa nahoana aloha no tsy nampahafantarina tamin’ny vahoaka mialoha, ny anaran’ireo rehetra « nahazo tosika » hirotsaka ho fidiana ê ? Ndrao tsy hanaiky ve ny vahoaka ?
Ary inona koa ity resaka fahaizan-dalàna ity ?
« Io lalàna io tsy ataotao foana » !! Marin’izany, ary hitan’ny vahoaka izao ny vokatr’izany !
Fahaizan-dalàna marina, no nahatonga an’izao fahaverezana iray lavaka izao !
Dė gaga elah!!!ity kitranoatrano ity ihany no mahavoa fa tsy inona akory
misy raha ao matoa konenina mafy toy izao indray mantsy e!
Ny ahy tsy ny filatsahan’iza no maninona fa kosa mba mila ny fifampierana MAZAVA dia
tokony ho fantatra koa ny antony hoe: MANINONA???satria efa tena be loatra izay tsy fahombiazana
izay nefa dia misy olon’i lalana ao @’io ANKOLAFY IO » HONO ». AMIKO ADALA2 ity aloha an!!!
24 septembre 2013 à 20 h 08 min
Dia ahoana moa no tsimaintsy Zanaky Dada sy Tim efa nivadika no narotsaka sy mitondra ny anaran’ny movansy???????? fa ny hafa izany mpitanjiro???????????
Précédent Article précédent : Kandida Dr Robison Jean Louis : Ny toky omeko anareo voalohany dia tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana
Suivant Article suivant : FJKM Imerikasinina : niombom-bavaka niaraka tamin’i Neny ny kandidà Dr Robinson sy ny kandidà Guy Ratsimoarivony